Kenya oo shaacisay liiska Macalimiinta Kenyaanka ah ee ay dileen Al Shabaab. - Awdinle Online
Kenya oo shaacisay liiska Macalimiinta Kenyaanka ah ee ay dileen Al Shabaab.
February 26, 2020 (Awdinle Online) –Dowladda Kenya ayaa si rasmi ah u shaacisay Macalimiinta Kenyaanka ah ee ay Al-shabaab ku dileen Gobolka Soomaalida degto ee Waqooyi Bari Kenya.
Guddiga macallimiinta Kenya ee loo soo gaabiyo TCS ayaa sheegay in tan iyo 2014kii ay Al-shabaab ku dileen Gobolka Soomaalida 42 Macalin taasina ay iyaga walaac ku abuurtay.
Guddoomiyaha Guddiga Adeegga Mallimiinta Kenya Nancy Macharia, oo difaaceysay sababta Macalimiinta Kenyaanka ah looga saaray Gobolka ayaa ku doodday in Al-shabaab ay dileen 42 Macalin taasina aysan sii socon karin.
Guddiga ayaa Macallimiin badan oo Kenyaan ah ka saaray Gobolka markii ay sare u kaceen weerarrada Al-shabaab ka geysanayaan halkaas gaar ahaanna kuwa sida gaarka ah loola beegsanayo Macalimiinta ajaanibta ah ee ka howlgala Gobolka Waqooyi bari Kenya.
Dhawaan Hoggaamiyaha Aqlabiyadda Baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa gudbiyay go’aan ka dhan ah Macalimiinta laga saarayo Gobolka taas oo sababtay in Baarlamaanka uu u yeero Guddiga si looga doodo Sababta Macalimiintu uga baxeen Gobolka Soomaalidu degto ee Kenya..
Magaalada Gaarisa ayaa laga diiwaangeliyay 180 Macalin oo Soomaali ah kuwaas oo si tabarucaad ah Ardeyda wax ku bari doona maaddaama Macallimiintii dowladda ay gobolka uga baxeen baqdin ay ka qabaan dagaalyahana Al shabaab.
Al shabaab ayaa weeraro badan oo dhiig ku daatay ka gaystay Gudaha Kenya,tan iyo markii Ciidanka Dowladda Kenya ay gudaha galeen Soomaaliya sanadkii 2011,xilligaa oo ay ku biireen Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya.
Siyaasiyiinta Kenyaan ah ee dhaliila Sayaasada Madaxweynaha dalkaasi Uhuuro Kenyatta ayaa dalbaday in Ciidanka Kenya laga saaro gudaha Soomaaliya,si loo ilaaliyo nabada gudaha dalka Kenya oo xuduud dheer la leh goboladda Koofureed ee Soomaaliya.
Previous articleWadooyinka Waaweyn ee Magaalada Garoowe Oo La Dhiga Ciidamo Badan
Next articleMadaxweyne Hassan Rouhani oo eeday u jeediyay Maraykanka